Ka baxsan Siyaasadda: Mucjisadii K/Cagta oo ka huleelay hoygiisa | KEYDMEDIA ONLINE
Ka baxsan Siyaasadda: Mucjisadii K/Cagta oo ka huleelay hoygiisa
Dhacdadii ugu weyneyd kubadda cagta tan iyo billaabashadii qarniga 21-aad ayaaa caawa ka dhacay Spian kadib markii uu Leo Messi ka tagay qalcaddii uu ku hanaqaaday ee Camp Nou.
BARCELONA, Spain - Mucjisada Kubadda Cagta, xiddiigii Barcelona, halyaayga Argentina, iyo madadaaliyihii ugu weynaa adduunka ku dhawaad 15-kii sano ee la soo dhaafay Leonel Messi, ayaa ka huleelay Barcelona, oo uu ku sugnaa 21-kii sano la soo dhaafay.
Camaaliqada Spain, ayaa dhawaan ku dhawaaqday in laacibka lixda jeer heysta abaal marinta Ciyaaryahanka ugu fiican sanadka, aduunka oo dhan, uu ka tagay naadiga, kadib dhaqaalo la’aan soo wajahday kooxda ka dhisay gobolka gooni u goosadka ah ee Catalonia.
Lionel Andrés Messi, wuxuu dhashay 24 Juun 1987, waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay ciyaaryahanka ugu fiican adduunka hadda, isla-markaana uu ka mid yahay ciyaartoydii ugu fiicnaa abid soo mara kubadda cagta, Messi wuxuu ku guuleystay lix mar abaal marinta Ballon d'Or, iyo lix mar European Golden Shoes.
Wuxuu waayihiisa ciyaareed ku qaatay Barcelona, ​​halkaas oo uu kula guuleystay 34 koob, oo ay ku jiraan toban horyaal oo La Liga ah, 7 koob oo Copa del Rey ah iyo Afar UEFA Champions League.
Wuxuu dhaliyay in ka badan 750 goolal xirfadaddiisa, kooxda iyo qaranba, waaana ciyaar yahanka goolasha ugu badan u dhaliyay hal koox. Waa sameeyay caawinta ugu badan horyaalka La Liga wuxuuna leeyahy (192) caawin.
Sida la saadaalinayo Mesii wuxuu ku biiri doonaa midkood Kooxaha dhaqaalaha carbeed lala garab taagan yahay ee Man City ama PSG, in kastoo ay macquul tahay in aado kooxo kale oo waaweyn sida Manchester United, Chalsea Juventus iyo Inter Millan.